Mananjary : niverina nitrandraka volamena ny Sinoa | NewsMada
Mananjary : niverina nitrandraka volamena ny Sinoa
Par Taratra sur 10/10/2017
Namoaka fanambarana ny fikambanana Craad-OI, mikasika ny fitrandrahana volamena ataon’ny orinasa sinoa any Vohilava Mananjary. Voalazany fa naaton’ny filohan’ny faritra Vatovavy Fitovinany sy ny Ofisim-pirenena misahana ny tontolo iainana (ONE) ny fitrandrahan’ny Sinoa volamena tany amin’ny kaominina Vohilava sy Ambaladara, distrika Mananjary, ny faramparan’ny taona 2016. Araka ny tatitra nataon’ny fikambanana firaisamonim-pirenena OIDESCM* ny fikambanana Craad-OI ankehitriny, milaza fa niverina mitrandraka any an-toerana indray ny Sinoa. Nampahafantatra ny mponina mikasika izany fiverenan’ny Sinoa hitrandraka volamena izany ny tompon’andraiki-panjakana any an-toerana, ny 27 septambra teo, saingy tsy naseho ny besinimaro ny taratasy fanomezan-dalana.
Naiditra am-ponja ny mponina iray
Nangataka izany taratasim-panjakana izany ny lehilahy iray, Raleva, mpikambana ao amin’ny OIDESCM any an-toerana. Ny alin’io 27 septambra io, nosamborina tao an-tranony izy, nafindra naiditra am-ponja vonjimaika any Mananjary, miandry ny fitsarana azy.
Toherin’ny Craad-OI sy ny OIDESCM ary ireo mpiara-miombon’antoka amin marobe izao fanaparam-pahefana atao amin’ny mpikambana aminy izao. Tsy eken’izy ireo koa ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ataon’ireo Sinoa. Manamarika izy ireo, fa manimba ny tontolo iainana, ny rano fisotro ny fampiasan’ity orinasa ity ny merkiora amin’ny fitrandrahana volamena.